Fiainana tarika :: Mandindona ny tarika Salala amin’ny endriny vaovao ihany ny feo beson'i Senge • AoRaha
Fiainana tarika Mandindona ny tarika Salala amin’ny endriny vaovao ihany ny feo beson’i Senge
Anarana tarika anisan’ny nambabo ny sofin’olona maro ny sanganasan-dry Salala. Tarika nivondronana telo mirahalahy manam-peo miavaka. Nifandimbiasan’ny hafaliana sy alahelo ary fisarahana ny fiarahan’izy ireo. Mitantara ny antony tsy nahatazanana ny tarika nandritra ny fotoana naharitra izy ireo. Ampahafantariny eto koa ny fisehoan’ny tarika amin’ny endriny vaovao ankehitriny.
Tarika niforona tany amin’ny taona 1983 ry Salala. Fiarahana mpianatra telo mirahalahy, teny Ankatso, izay natambatry ny fitiavana zavakanto no namorona ny tarika, nahitana an’i M’bassa sy Chistian ary Senge. Raha nirona tamin’ireo karazan-kira avy any ivelany ny mpanakanto sy ny olona mpankafy mozika tamin’ny fotoan’androny, dia nikaroka zavakanto hafa mihitsy ry Salala.
Nifototra tamin’ny « Beko », karazan-kira avy any Atsimon’ny Nosy ny gadona notrandrahin’ ny tarika. Miavaka amin’ny rehetra ny mozika novoizin’izy ireo satria hira tsy arahan-javamaneno mianga amin’ny foto-pisainana Beko. « Sarotra ny nametraka ny mozika nataonay tamin’ireny fotoana ireny saingy noraisinay ho adidy ny fampahafantarana ny kolontsaina avy any Atsimo noho izy tsy dia misy mpiresaka loatra », hoy i Christian.
Nantsoina manokana handray anjara tamin’ny lanonam-pamaranana ny fifaninanan-kira « Decouvertes RFI » notontosaina, tetsy Mahamasina, ry Salala. Nisokatra niaraka tamin’ izany varavarana samihafa ho azy telo lahy ary niroso tamin’ny sehatra matihanina.
Nisy fotoana kosa no nangina tanteraka ny tarika noho ny nahafatesan’i Senge, mpanao ny feo beso. Nifindra monina tany Frantsa i M’bassa, taorian’izay, ary mbola any izy hatramin’izao. Honjohonjon’i Christian irery ny famerenana ny tarika taty aoriana.
Niova endrika ry Salala rehefa nampiditra mpikambana vaovao saingy tsy nanary ny fototra niaingany. Efatra miarahalahy izy ireo no mamelona ny tarika, amin’izao fotoana izao.
Hatrany am-piandohana dia telo mirahalahy no nameno ny tarika. Niova ho efatra izy ireo ankehitriny. Ny fitondrana rivo-baovao eo amin’ny tarika no nanapahana hevitra haka olona efatra. « Ny fiainana tsy maintsy misy fiovana foana. Ny fisainana sy ny fanahy dia mbola ilay novoizin’i Salala tamin’ny 35 taona lasa hatrany no entina. Hafa foana ihany kosa ny mivelatra amin’ny tontolo misy ka izay no nanampiana olona iray hafa», hoy i Christian.
Avy amin’ny tontolo samy hafa izy telo mirahalahy voasafidy. I Valahery, manao ny feo ambony indrindra dia tao anatin’ny tarika Saravy izay niarahany tamin’ i Jerico, ilay manao ny feo beso. I Masabao kosa , izay namorona ny tarika Masabao, dia manaingo ny feo, ary miangaly ny feo antonony na ny feo faharoa. Izy ihany koa no manao ilay « feo sarotra indrindra », hoy Christian sady mitsiky.
Na dia eo aza ny fisian’ireo tarika hafa ireo dia manana ny toerana goavana sy laharam-pahamehena ho azy ireo hatrany ny tarika Salala. Nahazoany traikefa sady nanatanteraka ny nofinofiny ny nisafidianana ny mpikambana vaovao mba hanorina indray ny tarika Salala. Izy telo mirahalahy niditra ireto dia samy nivetso ny hiran’ny tarika rehefa mamerimberin-kira iny na manatanteraka fifaninanana.
Fikarohana feo beso
Nanano sarotra ny fitadiavana ny feo beso. Io no feo sarotra indrindra satria vitsy ny manana azy araka ny fanazavana. « Nahavariana anay, nandritra ny fitadiavana ireo hamelona indray ny tarika Salala, fa hay dia ny zanak’anabavin’i Senge ihany no handimby azy eto amin’ny tarika hiangaly ny feo beso » , hoy indrindra i Christian raha nanazava ny fitadiavana ilay feo andrin’ny tarika Salala.
« Efa maro ireo olona nofantenana nandritra ny fotoana maro. Ny tombony ho ahy dia izaho tao anatin’ny fianakavian’i Senge. Efa niezaka aho ny niditra tao anatin’ny tarika taloha fa kosa tsy nety tanteraka ny nofinofiko. Ankehitriny, mbola tsy mino foana aho fa izaho no hamelona ny feon’ny anadahin-dreniko. Tiako ary reharehako ny mamelona izany kanto nimasoan’ ny ray aman-dreny izany », hoy i Jerico manazava ny fihetseham-pony taorian’ny nahavoafidy azy hanao ny feo beso hanolo an’i Senge.
Fahatairana tamin’ny torimaso Nisy akony goavana teo amin’ny tarika Salala ny fodiamandrin’i Senge, ilay manao ny feo beso. Nanampy trotraka izany ihany koa ny nialan’i M’bassa noho izy voatery hipetraka tany ampitan-dranomasina. An-taonany maro no nandinika ny hamerenana ny tarika indray i Christian sy i M’bassa.
Taty aoriana vao tapa-kevitra i Christian, izay hany sisa tavela teto Madagasikara, mba hikaroka ireo mpanakanto hamelona indray ny tarika. « Rehefa niresaka izahay sy i M’Bassa dia noraiketina fa hovelomina indray ny Salala. Dia natao ny fitadiavana ireo mpikambana mandrafitra ny tarika ankehitriny. Betsaka ny mahay mihira fa ny misafidy an’izay manana ilay fanahy voizin’ny tarika no sarotra », araka ny fanazavan’i Christian.
Isan’ny nahagaga sy nampihetsi-po azy ireo ny fiarahana tamin’izy telo mirahalahy, mpikambana vaovao, satria raha vao telo volana monja niverenana an-tsehatra dia nahavelom-bolo sahady ny fandraisan’ny mpankafy azy ireo. « Tsy nanadino anay ny mpankafy. Misy ny milaza fa toa tafaverina toy ilay nahalalana anay taloha izahay. Tsy very izany ilay fanahin’ny Salala», hoy hatrany i Christian.
Efa nahavita seho maherin’ny dimy amby roapolo ny tarika hatramin’izao. Manana vinavina ny hamoaka rakikira vaovao izy ireo, atsy ho atsy. Efa misy ihany koa ireo hira vaovao hatolotr’izy ireo mandritra ireo seho ataony.
Nisongadina tamin’ny fanaovana mozika am-bava tsy narahin-javamaneno ny tarika Salala. Niavaka izy ireo noho izy mifototra amin’ny aingam-panahy Beko. Tsy mampiasa zavamaneno mihitsy izy ireo rehefa mamoron-kira sy mitady ny feo hiangaliana azy. Ny sofina sy ny saina ary ny aingam-panahy no akora entin’ny tarika mamokatra zavakanto maroloko.
Toy izany hatrany no fanaon’izy ireo na eny an-tsehatra aza. “Ho an’ny mpankafy efa zatra manatrika fampisehoana ataonay dia mahita fa tsy misy zavamaneno mandravaka ny mozika ataonay eny an-tsehatra. Misy kosa anefa ny fotoana ampiasainay gitara na mandôlina ihany rehefa tena lava ny seho. Fomba natao hakana aina ihany izany satria olombelona nofo sy ra ny tena ka manam-petra ny tanjaka sy angovo enti-mivetso hira mandritra ny ora maharitra”, hoy hatrany i Christian.
Fihetsiketsehana teny Ambodin’Isotry Mifampitana ireo mpivarotra sy ny kaominina
Fampisehoana sy fankalazana Hivondrona amina sehatra tokana ireo mpanakanton’ny « Pazzapa 3 »
Fampianarana hainteny Raikitra ny fampiofanana ho mpikabary
Kitra – Ara-pirahalahiana :: Resin’i Kenya, rehefa tsy nahafaty «Penalty», ny Barea
Famongorana ny fahalovana :: Nosokafan’ny Bianco ny tranonkala manamora ny fitorohana kolikoly